လက်ဝဲ: February 2012
အရင်လိုပဲ.. သား ပြင်တုန်း ဆင်တုန်းပါ... အမေ
မနက်ဖြန်က စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေတုန်း
မနေ့က ကျပ်ကျပ်ညပ်ညပ် လှောင်ပိတ်နေတဲ့ ဘတ်စကားအဟောင်းကြီးထဲ ပါသွားရဲ့...
ထီးလဲမပါဘူးအမေ.. သား ထမင်းချိုင့်လဲ ယူမသွားဘူး
ဘာကို အာခေါင်ခြစ်ပြီး ကျုံးဝါးနေရတာလဲ.. ဘာကို လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး အားမွေးရမှာလဲ...
သားမှာ.. အနာဂါတ်ရှိလား အမေ...
မျှော်လင့်ချက်ကြီး သက်သက်နဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာ မတ်တပ် ရပ်နေရတာ..
ကိုယ်ခံအားတွေ လေတိုးခံထားရလို့... အအေးပတ်နေတယ်.... မနေ့က မနက်က
အနွေးထည်မဝတ်ပဲ အလုပ်သွားမိတယ်.. အမေ..။
စိတ်ထဲမှာလဲ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ မရင့်ကျက်မှုတွေလို့ ထင်တာပဲ အမေ..
သူတို့တွေ သားဘဝကို ကန်ကျောက်ပြီး ကစားနေကြတယ်..
လေတွေ တိုက်တိုင်း စစ်ကိုင်းတံတားကြီးပေါ် ရောက်ရောက်သွားတယ် ...
တစ်လောကလုံး ကို အဲဒီမြစ်ပေါ်မှာ ကြောက်လွန်းလို့ ငိုဖူးတယ်.. အဲဒီနေ့က လေ ကလဲ ကြမ်းပါတယ်..
သိမ်ငယ်လို့ ဇွဲမရှိတာလား.. ဇွဲမရှိလို့ သိမ်ငယ်တာလား... ကြောက်တယ်..
ဘာလို့ ကြောက်ရမှာလဲ သားရယ်.. ဟင့်အင်း မဖြေရဲဘူး ကြောက်တယ်..
အဲလို.. ကြောက်ခဲ့ဖူးတာ အမေသိတယ်မဟုတ်လား အမေ.. အနီရောင်ကို ငယ်ငယ် ကကြောက်တယ်.။
ကျားကြီးတွေ ကိုကြောက်တယ်.. သရဲကြီးတွေကို ကြောက်တယ်.
ကပ္ပိယကြီး ဦးသိုက်ထင် ကို ကြောက်တယ်..။
ခုတော့ သိပ်ညစ်ပတ်တဲ့ ခွေးဝဲစားလေး တစ်ကောင် ပုံစံနဲ့... လေလွင့်လို့...
တစ်ခါတစ်ခါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ရောက်သွားလိုက် လမ်းပေါ်ရောက်သွားလိုက်..
မာနဆိုတာတွေက ကျောင်းသားတစ်ယောက်က စာတစ်ပုဒ်ကို
နှစ်ရက်လောက် ကျက်လို့မှ မရနိုင်သေးတဲ့ ဝေဒနာမျိုးနဲ့ ရေလိုက်ငါးလိုက်...
ညည အိပ်မပျော်တာ စိတ်ကျရောဂါ လက္ခဏာလား..
အချိန်ပြည့် ထိုင်းမှိုင်းနေတာကရော.... တက်ကြွမှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာကရော..
လမ်းပေါ်မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက် လျှောက်နေရတာကရော..
သား စိတ်ကျရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရလားအမေ..
သား ကမ်းပါးယံမှာ.. ငေးနေရင် စိတ်ကူးတွေက မြစ်ထဲကို ခုန်ချနေတယ်..
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပဲထိုင်မိပြန်ပြီ.. ဆေးလိပ်တွေပဲ သောက်မိပြန်ပြီ အမေ..
သားကိုကြည့်ပါဦးအမေ.. အရင်လို ပိန်တုန်းပဲလား.. မျက်တွင်းတွေ ခွက်နေတုန်းပဲလား..
ညည အိပ်လို့ မရလို့ပါအမေ... သားအိပ်ယာထဲမှာ... အိပ်မက်ဆိုးကြီး အိပ်နေတယ်.
အမေ... သူနဲ့ တူတူ သားမအိပ်ရဲလို့.. မနက်ခင်းကို အနားယူမှု မရှိပဲ မျက်နှာသစ်သစ် ပေးနေရတယ်..
အထိတ်တလန့်... သတိပေးခံရ.. သားဟာ ကြောက်နေရတုန်းပဲတဲ့.. အမေ...
သား အံ့သြတယ်... အမေ အားလုံးကို သိနေတာပဲ.. အမေက သားရဲ့ အကြားအမြင်ဆရာမကြိးပေါ့..
ညည စောစောပြန်အိပ်ပါ.. ပိုက်ဆံတွေ ခြွေတာသုံးပါ.. မျက်တွင်းတွေခွက်တယ်.. သားအရမ်းပိန်တယ်...
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ.. သားရယ်.... ဆေးလိပ်တွေမသောက်ပါနဲ့..
သားကို အမေ့စကားတွေက လှိုက်လှိုက်ပြီးစားတယ်...
သားက အမေ့အကြည့်တွေကို အိပ်မက်မက်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတယ်....
သား ချောင်းတွေဆိုးတယ်.. ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားတယ် အမေ....
သားရဲ့... သက်ရှိဒိုင်ယာရီတစ်အုပ်က သွေးစစ်ကြည့်ဖို့ ပြောထားတယ် အမေ...
တစ်ယောက်တည်းနေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဖော်လုပ်ရတယ်.. သားမှာ ရည်းစားမရှိပါဘူး.. အမေ..
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်.. စောစောက မျှော်လင့်ချက်လိုပါပဲ.. သားကိုက... သူ့ဇာတာထဲမှာ.
လက္ခဏာ အရေးအကြောင်း တစ်ခု မဖြစ်ခဲ့ဘူးနဲ့ တူပါရဲ့ အမေရယ်.. . အချစ်ဆိုတာ........
ကျွန်တော်အရှည်ထားခိုင်းရတဲ့ သူ့ ဆံပင်လေးတွေ.... အမေရဲ့.. (ထားပါတော့)
နေ့ခင်းဖက် အိပ်အိပ်ကြည့်လဲ သား ဝမလာပါဘူး အမေ.. ညဖက် သား ဂရုစိုက်ပြီးအိပ်ပါ့မယ်..
လမ်းအဟောင်းကို ဖိနပ်အသစ်နဲ့ ပြန်လျှောက်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်.. အမေ..
သားခြေရာ အဟောင်းတွေ ကိုတော့ လိုက်ဖျက်နေရသေးတာပေါ့.. အလုပ်မှာ သားအဆင်ပြေပါတယ်..
အရင်လိုပဲ.. ရင်ခံနေရတာပဲ... ရင်မောနေရတာပဲ.. လှိုက်လှိုက် လှိုက်လှိုက်နဲ့.. အောင့်နေသေးတာပဲ... အမေ..
ထီးလဲ မပါသေးဘူး .. ထမင်းချိုင့်လဲ မယူချင်သေးဘူး... အရင်လိုလဲ ကြောက်နေရတုန်းပဲ...
ခု... လမ်းပေါ်မှာပဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာပဲ... အသုံးအဖြုန်းကြီးတုန်းပဲ...
သူ့ ဆံပင်လေးတွေက သားကို မေ့ထားတုန်းပဲ... သား အရင်လိုပဲ....
အမေ.... သား ကိုယ့် ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်... အသားပိုတွေကို ဖဲ့ဖဲ့ချနေတယ်..
အနံ့ဆိုးတွေကို ရေချိုးနေတယ်... ညည ပျော်အောင်အိပ်နေတယ်..
ဒါပေမယ့်.. အရင်လိုပဲ.. အရင်လိုပဲ... အ... ရင်... လို... ပဲ...
သားမှာ ... အားမရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပြောစရာ ရှိတယ်.. အမေ...
စိတ်မပူပါနဲ့ ... အမေ... သားအဆင်ပြေပါတယ်..
သား... အရင်လိုပါပဲ......................။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 10:39 PM6comments:
ပြုံးတိုင်း ရယ်တိုင်းမှာ ငါ့အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်စီ ချန်ရစ်ခဲ့
နင် ဟာငါ့ချစ်သူ ဖြစ်တယ် ဇင်။
သိလားဇင်.. အချစ်က နင်၊ အချစ်က နင် ငယ်ငယ်က စီးခဲ့တဲ့ စက်ဘီးလေး၊
အချစ်က အိတ်ဆောင်နာရီလေးတစ်လုံး၊ ငါမရခဲ့ဖူးတဲ့ ဆင်တူအင်္ကျီလေးတစ်ထည်၊
နင့်ကို စာလိုက်ပေးဖူးတဲ့ လမ်းလေး၊ အချစ်က နင်အိမ်မှာ ရှိတဲ့
အမွှေးပွ ခွေးလေးပဲ.. ဇင်.. နင်နဲ့ ပက်သက်သမျှဟာ တကယ်တော့ အချစ်ပဲ။
ချိုမြိန်သာယာမှုတွေကို အရမ်းကာရော ငါ ပေးချင်တာပေါ့ ဇင်.. ဘဝကို
ဘယ် သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့ ကြည့်ကြည့် နင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့
လမ်းမသင့်ဘူးတဲ့လား... နင်ပဲ ဓူဝံကြယ် ဖြစ်လိုက်စမ်းပါတော့ ဇင်ရယ်။
ကျူရှင်လှေကားထက်က ဇင်၊ ကျောင်းပေါက်ဝ က ဇင်၊ လျှာထိုးဦးထုပ် အနီရောင်လေးနဲ့ ဇင်၊
ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီကို ငါ ဂျီးစော်နံအောင် ဆော့တတ်တဲ့ ခေတ် ကတည်းက
နင်ဟာ ငါ့ချစ်သူ ဖြစ်တယ် ဇင်။
ငါဟာ စာသင်ခန်းဝမှာ နင်ပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ပြာလေး ဖြစ်တယ် ဇင် ..
ခဲတံနဲ့ ရေးထားတဲ့ “လွမ်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးထဲမှာ ငါနေထိုင်တာပေါ့။
ခုကော လွမ်းမနေဘူးလား ဇင်.. နင့်ကို ငါချစ်တယ်။
လူတကာ လျှာပေါ်က မြက်တွေကို ငါ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခဲ့တာ မဟုတ်ရိုး အမှန်ပါ။
သံသယတွေ စိမ့်ဝင်ကြပေါ့... ငါ့အိပ်မက်ကလေး တစ်ရေးနိုးရပေါ့။
ပန်းနုရောင်စာအိတ်လေးထဲ ငါ အလည်ရောက်ခဲ့သေးတယ် ဇင်ဇင်..
စာအိတ်ဖြူလေး ရောက်တဲ့နေ့ကပေါ့။ “ခွဲနေကြရအောင်”ရဲ့ နောက်မှာ ဒီကဗျာခေါင်းစဉ်ကို
သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ရေးခဲ့ ဖူးပါတယ်.. နင်ဟာ ငါ့ချစ်သူဖြစ်တယ် ဇင်။
နင့်လမ်းထဲကို ငါ ပြန်လျှောက်တယ် နင့်အရိပ်ကို ငါ ပြန်ရှာတယ်..
“ရင်ခွင်သစ်” သီချင်းကို ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့ အိပ်မက်မက်တယ် ....
ငါ့ရင်တွေ ကျိုးရပေါ့.... ငါ့ခြေလှမ်းတွေ ချိနဲ့ ရပေါ့... ဇင်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ သဝန်တိုချင်တယ်။
အရူးတစ်ယောက်လို တောင်စဉ်ရေ မရတွေလဲ ရေးခဲ့..
“မိုးရေစက်တို့ နှင်းစက်တို့ ... ငါ့ ကျောင်းတက်ချိန်လေးကို ပြန်လာခေါ်ပါ”
နင့် အငွေ့အသက်မရှိတဲ့ နှစ်တွေကို ငါ မချစ်ဘူး နင့်အနံ့မရတဲ့
ညတွေကို ငါ မုန်းလွန်းလို့ မအိပ်ချင်ဘူး ဇင်..
သက္ကရာဇ် အချို့က ငါသေပြီလို့ ကြေငြာကြလိမ့်မယ်.
ခု နင့်ရှေ့မှာ ငါလျှောက်လာနေတာ နင်မကြိုဘုးလား.. ငါလဲကျချင်နေပေမယ့်
ချစ်နေသေးလို့ စကားလုံးလေးတွေ အစိုဓါတ်ကျန်နေသေးတယ်..ဇင်...
နင်ဟာ ငါ့ချစ်သူ ဖြစ်တယ်။
ခုတော့ ငါ ကြယ်အသေတွေ သင်္ဂြိုလ် နေတယ်။ သက္ကရာဇ်ဖြိုချင်နေတယ်
သံစဉ်သစ်တွေ မရှိတဲ့ သီချင်းဟောင်းကို ပဲ ဂစ်တာ အသစ်နဲ့ ပြန်တီးမယ်...
င့ါကိုယ်ပွားလေးတွေ နင့်ဘေးနားက ဘယ်တုန်းကမှ နင်နဲ့ ဝေးရာကို ထွက်မသွားဖူးဘူး မဟုတ်လားဇင်..
ပြုံးပါ ဇင်.. နင်ရယ်ပါ... ငါ ကဗျာတွေ ရေးနေမယ်..
နင်ကြိုက်တတ်တဲ့ သီချင်းတွေပဲ ရွေးနားထောင်မယ်... နင့်ညတွေကိုပဲ..
ရွေးပြီး အိပ်မက်မက်မယ်.. နင့်နှလုံးသားကို ငါ မက်မက်မောမော မွေးစားမယ်
ပန်းရိပ်ကို ခိုမိမှတော့ မိုးပြိုမယ် ဆိုလဲ ပြိုစေတော့ ဇင်....
နင်ဟာ ငါ့ချစ်သူ ဖြစ်တယ်။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 11:11 AM4comments:
အကင်း တဖြုတ်ဖြုတ် ညနေ
သံဝေဂ ဆန်တဲ့ လက်ဖျားလေးတွေနဲ့
ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုယ် ပြန်ပြန် စမ်းတယ်
ညညဆိုလဲ ယောင်ယောင်ပြီးတော့ နမ်းတယ်
ပြန်မလာဘူး ဆိုပေမယ့် တောင်ပံကျိုးလေး
အဓိပ္ပါယ် မဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် လှေနံဘေးကို
ငါ့ဇာတိနဲ့ မရဏ အတွင်းက အကြားအလပ်ကာလလေးကို
ဇရာကို ဘယ်သွားထားရမလဲ (ဗျာများဖူးတယ်)
ဝမ်းသာ အယ်လဲ ဘယ်နေရာက လက်ခံမလဲ (သိမ်ငယ်တယ်)
မရပ်တန့်ဘူးလို့ နာရီတွေ က့ ဖြဲခြောက်နေသလိုပဲ (ကြောက်တယ်)။
ဘယ်စမ်းရေမှာပဲ ပဋိသန္ဓေ နေရ နေရ။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 12:57 PM3comments:
ဘူတာတွေသာ ဥသြဆွဲ သွားကြ
ယန္တယားစနစ် ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားတက်ဖို့
နောက်ကျောမှာ အိပ်မရတဲ့ ညကို လိပ်ပြီး ပိုးထားတယ်
အိပ်ကပ်ထဲမှာ အချီအချလှတဲ့ ကဗျာသုံးလေးပုဒ် က ရိက္ခာ
ဆေးလိပ်ပြာတွေကို ကျန်ခဲ့တဲ့ သံပတ်နာရီ ချောက်ချက်ချောက်ချက်
မြည်သံထဲကို ခြွေချခဲ့မိတယ် (ထင်တယ်)။
ဂိတ်ဆုံးထိ လက်မှတ်ဝယ်တော့ ဘဝတစ်ဝက်ကို
ပေတံနဲ့ ညှိပြီး ဗြိကနဲ ဖြဲပေးတယ်
လောကကြီးကပေးတဲ့ ဘယ် ဖြတ်ပိုင်းမှာမှ အပ်ပေါက်ရာမပါပဲကိုး
ရထားပေါ်တက်တော့ အပြင်မှာ လူပြတ်နေပြီ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 11:17 PM 1 comment:
သေချာတာတော့ အားလုံးက တဖက်သတ်ကြီးပဲ
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 6:29 PM2comments:
Labels: Gothic ပေးတဲ့ကဗျာ, ကဗျာ
အို.... မိုးရေစက်တို့ နှင်းစက်တို့
မင်းနဲ့ တစ်ခုံတည်း ထိုင်ဖူးတာလေ သူငယ်ချင်း
အတန်းထဲမှာ ငါ စာမတော်ဘူး
ကျွန်တော့်ကို ရိုက်ဖူးတယ်လေ ဆရာမ
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 11:31 PM2comments:
တိမ်ကို ကျူးရင့်နေတဲ့ ရှုခင်း
စူးနေတဲ့ ဆူးကိုပဲ နင်းတက်သွားရတယ်
ငါဟာ တစ်ရှူးတစ်စ ပါ ဆိုတာ
ငါ့ကိုယ်ငါ ယုံအောင် ဖျောင်းဖျလိုက်ပါ့မယ်
နင် လုံးချေပြီး လွှင့် သာ ပစ်လိုက်။
သစ်ရွက်လှုပ်တာလဲ အလွမ်းသံ ထွက်နေတာပဲ
သာမန်ကာ လျှံကာ ကြည့်လဲ ရင်ခံတာပဲ။
ဘာတေးမှ မဆိုတဲ့ ငှက်ကို
အိပ်မက်ကို ပ, ထုတ်လိုက်ရင်လဲ
ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲက လို စိတ်ကူးယဉ်နေရပြန်ဦးမယ်။
ငါ့ရှေ့မှာ အဖြူအမည်း ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၊
ကြမ်းပေါ်မှာ ဆေးလိပ်နဲ့ ရင်ထဲမှာ ဂစ်တာ
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 9:27 PM7comments:
အိပ်မက်တွေ အများကြီး မက်ခဲ့တယ်
သူ့ည ရဲ့ မျက်နှာကျက်မှာ
သူ့ရုပ် သူ့နာမ်နဲ့ သူ့တဒင်္ဂလေးတွေနဲ့
သူ့ အခိုက်အတန့်လေးနဲ့သူ ပြောပြောဆိုဆို
သူ့ ရင်ဘတ်ဖနောင့်ပြတ်လေးကို သဲကြိုးလဲပြီး
ဖန်တီးမှု သက်သက်ကို မြတ်နိုးသတဲ့
ဝင်သက်မှာ တစ်ဖြတ်၊ ထွက်သက် မှာ တစ်ဖြတ်
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 10:15 AM3comments:
ညကြီး ကိုယ်တိုင်က လက်ဖျားတွေ အေးနေရတယ်..။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 8:07 PM No comments:
သက်ပြင်းတွေ လာချထားတဲ့ မြို့
စွန်းလျက် ထင်းလျက် ရှိရဲ့
ငါတို့တွေနဲ့ ငါတို့ရဲ့ လေလွင့်လမ်းမတွေလဲ
ဒါတွေရှိရဲ့ ဟောဒါတွေ ရှိပါရဲ့
ပြည့်တန်ဆာနဲ့ အရူးလဲ ရှိပါရဲ့။
ဒေါင်ဒေါင် ဒင်ဒင် အော်ဟစ်ကြ
တန်ခိုးကြီး ဘုရားနဲ့ တံတားတစ်စင်းလဲ ရှိတော့ရှိပါရဲ့။
ဗြဟ္မစိုရ်တရားနဲ့ လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ
တံတားအောက်မှာ မြက်တွေလဲ ပေါက်လို့။
ဈေးအိုကြီးနဲ့ ဆေးရုံလေးလဲ ရှိပါရဲ့။
နှာခေါင်းသွေး ယိုဖူးထားတဲ့ မြို့ပါလို့
ထို ဝိသေသ များစွာနဲ့ မြို့ကလေးက စက်စက်ယို
နီယွန်မီးတွေ မလင်းနိုင်တော့တဲ့ နှစ်လမ်းသွား လမ်းမကြီးလဲ
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 11:22 AM4comments:
ဟိုးတုန်းက ဆိုတာကို ကောက်မကိုင်နဲ့
မင်းဘဝနဲ့ မင်း ကျေနပ်နေလိုက်..
ပြုံးမှ ရယ်မှ .. ဘဝမှာနေပျော်တာလို့..
မင်းထင်ရင် ထင်သလို ဟားတိုက်နေလိုက်ပေါ့လို့..။
ငါက ငါ့ အိပ်မက်နဲ့ငါ..
ငါ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ငါ..
ငါ့ အသစ်တွေနဲ့ ငါ..
ခုဆိုရင်လေ... အခု ဆိုတာတွေနဲ့ ပြောင်းလဲနေကြတာ..
ငါတို့က အခု လက်ရှိအနေအထားနဲ့..
ပတ်စပို့ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံလောက်ဖြစ်ဖြစ်..ရိုက်လိုက်..
ဟိုးတုန်းက ငိုက်နေတာတွေ/ ငိုင်နေတာတွေ..
ဟိုးတုန်းက.. တွေးနေတာတွေ/ တွေနေတာတွေ..
တော်ပြီ ဟိုးတုန်းကကို ..
ဟေ့.. ဒီမှာ ငါပြောပြမယ်..
မင်းလဲ လိုက် ပြော..
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 10:21 PM No comments:
ရင်ဘတ်ကို ဖွက်ထားတဲ့ တိမ်
ရယ်စရာ ချွတ်ချော်မှုတွေက ပိလို့.. ပြားလို့..
ဝေလို့ .. ကြွေလို့...။
ငါနဲ့ ပူပူနွေးနွေး မက်ထားတဲ့ အိပ်မက် ကွဲရှရှကြီးကို..
သြော်... ရင်ဘတ်ကြီးတောင် ညိုလို့.. မည်းလို့ ..
သူ မာန်တင်းလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်..
ရွာချမိတော့မယ်နဲ့ တူရဲ့..။ ။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 10:07 PM 1 comment:
မတူကွဲပြားခြင်း၊ ဘာသာစကား နှင့် အနုပညာပုံကြမ်း
“မတူကွဲပြားစွာ ခံစားကြည့်ရအောင်” လို့ ဆိုလာရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခံစားချက်မျိုးကို ဘယ်လို ပုံစံပြောင်း ခံစားကြမလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ခံစားချက်တွေ ပွစာတက်ကုန်ကြတယ်။ အမြင်မတူမှု၊ မတူကွဲပြားမှု ဆိုတာ အမှန်တော့ ဒါတွေကို ခေါ်တာပါပဲ။ ခံစားပုံချင်းမတူရာက စတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ အမြင်လွယ်ဆုံး ကနေ စပြောကြည့်ရအောင်။
တဂျုန်းဂျုန်း ခုတ်မောင်နေတဲ့ ရထားကြီး ဆိုက်ကာနီး ဥသြ ဆွဲလိုက်တဲ့ အသံကို ဆူညံသံလို့ သတ်မှတ်မလား သာယာသံလို့ သတ်မှတ်မလား။ မြို့ပတ်ရထား ကြီး စက်မှုဇုန်ဘူတာမှာ လာဆိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်မှ ရှုပ်နေကြတဲ့သူတွေက ဆူညံသံလို့ ပြောကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နေရောင်ကလဲ ပျောက်ကာနီး မပြန်တာကြာတဲ့ မွေးရပ်မြေ ဘူတာကိုလဲ ဆိုက်ကာနီး ကိုယ့်စိတ်ကလဲ ရောက်ချင်စိတ်တွေဆောင်နေတဲ့ အချိန် ဆွဲလိုက်တဲ့ ဥသြသံ ကတော့ အင်မတန်မှ သာယာတာတဲ့ဗျနော်။ ဒါ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေါ့။
ရာမာယနဇာတ်ထဲမှာ တစ်လျှောက်လုံး ဗီလိန်လုပ်လာတဲ့ ဒဿဂီရိက ချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပ ချစ်သူ ထဲမှာ သိပ်ကို ဇာတ်နာနေရှာတဲ့ သနားစရာ ဇာတ်လိုက်ကြီး ဖြစ်နေတာကို အံ့သြဘနန်း ခံစားလိုက်ရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပါပဲ။
Informal Thinking နဲ့ တွေးပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို ကဗျာဆရာတွေ က တင်ပြလာကြတယ်။ ကျွန်တော် ပြောလိုရင်းကို ရောက်ပါပြီ။ ကဗျာဆရာ ဟာ အများလက်ခံထားတဲ့ ဆူညံသံကို သာယာသံပါလို့ တင်ပြမယ်။ ကာရန်အဖွဲ့အနွဲ့ မပါတဲ့ ခပ်ရိုးရိုးစာကြောင်းတွေကို စီပြီးတော့ “ဒါ ကဗျာပါ” လို့ ချပြမယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပြီးသာ ဘာသာစကားတွေရဲ့ အတွင်းသားထဲမှာ ကြွယ်ဝတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိနေပြီးသားပါ။ ဒါကို မြင်အောင် ကဗျာဆရာက ပြချင်တယ်။ ဒါဟာ အနုပညာ ဟုတ်ပါတယ်၊ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာက စောစောက ပြောတဲ့ ဆူညံသံနဲ့ သာယာသံကို ခွဲခြားပြသလိုမျိုး စာဖတ်သူရဲ့ ခံစားနားလည်မှုပေါ်မှာပဲ မူတည် သွားတော့တယ်။ (ဒါ့ကြောင့်ပဲ ယနေ့ ကဗျာဆရာတွေမှာ စာဖတ်သူကို ငဲ့ရတဲ့ တာဝန်တစ်ခု ပေါ့သွားတယ် လို့ ထင်တယ်။) “ဘာသာစကားကို ကစားတယ်” တဲ့ဗျ။ အဲလို သုံးနှုန်းကြတယ်။ ဘာသာစကားရဲ့ အဆီအနှစ်တွေကို တူးဖော်ကြတာ။ ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာစကား ကဗျာတွေကြောင့် ဘာသာစကားတစ်ခု ပျက်စီးမသွားနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ တူးဖော်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နယ်တစ်ခု အတွင်းကနေ အခြားနယ်တစ်ခုကို မသိမသာ ရောက်သွားအောင်ထိ တူးဖော်လို့ ရနိုင်တယ်။ လူမြင်ကွင်းကနေ မဟုတ်ပဲ တိတ်တဆိတ် ဆိုသလို ဘာသာစကားဟာ နယ် တစ်ခုဆီကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရွေ့သွားနိုင်တယ်။
ပုံကြမ်းကို အချောသတ်ပုံစံ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ လျာထားပုံစံ ထုထားတဲ့ ပန်းပု ကို ရုပ်လုံးမြင်အောင် ကြည့်ပါ။ ပန္နက်ရိုက်ထားတဲ့မြေပြင်ကို အဆောက်အဦး အဖြစ် မြင်ကြည့်ကြစို့။ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာစကားဟာ အနုပညာအားလုံးရဲ့ ပုံကြမ်းတစ်ခု ဖြစ်နေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။
တဒုန်းဒုန်း တဒိုင်းဒိုင်း အသံတွေကို သံယာမှုလို့၊ နောက်ပြီး ဒီတိုင်းချရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေထဲက အဆီအနှစ်တွေကို ကာရန် (အနုပညာ) လို့ မြင်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ ဘာသာစကား ကဗျာတွေရဲ့ နောက်ကို လိုက်လာခဲ့ပါ။ ဘာသာစကားနယ်ချဲ့ နေတဲ့ တူးဖော်ရေးသမား ကဗျာဆရာတွေနဲ့ တစ်နေရာရာမှာ တွေ့ရအောင်လို့ပေါ့။
ရေးသားသူ လက်ဝဲ at 8:50 PM No comments: